Fametahana tsindrona - Chapman Technology Co., Ltd.
Ny ampahany mahomby dia manomboka amin'ny bobongolo voavolavola tsara. Ity dingana sarotra sy marina ity dia mamaritra ny vidin'ny famokarana sy ny androm-piainana ary mitaky ny singa fototra amin'ny famolavolana bobongolo rehefa manaraka ny famaritana miavaka ampahan'ny iray.
Heverina ho iray amin'ireo lakilentsika dimy ho an'ny fahombiazana, ny famolavolana bobongolo tsara sy ny fananganana bobongolo dia hanampy amin'ny fampihenana ny vidiny, hampitombo ny kalitao ary hanatsara ny fahombiazany. Chapman Makerorinasa dia afaka manohana karazana rindranasa famolavolana lozisialy, ao anatin'izany ny UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS sns. Mazava ho azy, azonay omena anao ny fenitry ny famolavolana bobongolo: DME, HASCO, MEUSBURGER, LKM, ary koa ny famakafakana ny fantsom-bika handinihana ny volavolam-bolo sy ny faritra rehetra alohan'ny fampandrosoana.
Chapman Maker ny fanamboarana fotodrafitrasa dia manolotra fahalalahana amin'ny fihazakazahana ny karazana fitaovana thermoplastic rehetra. Manokana izahay amin'ny famokarana vokatra ho an'ny fampiharana marobe ary koa ho an'ny indostria manokana ao anatin'izany ny fiara, fitaovana elektronika, mpampifandray, indostria, fiarovana, fitaterana ary mpanjifa.
Chapman Maker Ny orinasa dia manana milina fanindronana 90 ka hatramin'ny 600 taonina, afaka manampy anao amin'ny fanatsarana sy ny fanatsarana ny famolavolana ny vokatra ianao mba hahatratrarana ny valiny mety indrindra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny singa.
Fahaiza-manao Core Molding
1.Molaka be pitsiny
2.Smalling mazava tsara koronosy
3. Atsofohy ny famolavolana sy ny famolavolana
4.LSR & famolavolana fingotra
Ny ekipanay ao amin'ny Chapman MakerMiara-miasa akaiky amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay mba hanomezana tolotra sanda fanampiny ho an'ny indostria mitarika singa sarotra. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireto serivisy ireto:
• Fivoriambe misy singa maromaro
• Fanamboarana sy fikolokoloana ny bobongolo
• Fandaharana sy fombafomba famindrana bobongolo
• Lasary ultrason
• Kanban, Programme Stocking, sns.
• Manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ezaka
• Fandokoana ampahany
• Loko manokana sy ny loko fanovana haingana